सांस्कृतिक बहसः नांगिनु नारी स्वतन्त्रता हो ज्योतीजी ? नांगो शरीरमा कुनै सौन्दर्य रहँदैन- Onlinekhabar News | MeroSolti.Com
जंगली युगमा मान्छे नांगै बस्थे । पशुवत चेतना र जीवन थियो मान्छेको । आजजस्तो सामाजिक नियम,कानुन, मर्यादा, ढोंग, बन्धन केही थिएन । साँच्चै निर्बन्ध थियो मान्छे । पशुजस्तै ।
अस्तित्वको संघर्षले मान्छे आज विकसित युगमा आइपुगेको छ । संघर्ष जारी छ र जारी रहने छ । अझ करोडौं बर्ष पृथ्वीमा मानव अस्तित्व जारी रहने भविश्यवाणी गर्छन् वैज्ञानिकहरू । प्रकृति बिरूद्धको संघर्षमा मान्छेले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् र भबिश्यमा पनि हुँदै जाने निश्चित छ ।
विश्वबन्धुत्वको भाव र मानवतावाद क्षीण हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सीमा र मर्यादा उलंघन हुने क्रम बढ्दो छ । संस्कृतिको नाममा विकृति मौलाउँदो छ । मान्छेले आफूलाई सामाजिक प्राणीको रूपमा भन्दा केवल एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा जीउनमा आनान्दानुभूति गर्न थालेका छन् । व्यक्तिको स्वतन्त्रता पक्कै सर्बोच्च हुनुपर्छ । तर, मान्छे सामाजिक प्राणी हुनाको नाताले उसको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक हित अधीनस्थ पनि हुनैपर्छ । नत्र मान्छे जंगली युगमा नै फर्कने छ ।
हाम्रो समाज पनि परिवर्तनको बाटोमा तीब्र गतिले दगुरिरहेको छ । कैयौं सकरात्मक परिवर्तनसँगसँगै केही नकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएका छन् । जसको नियन्त्रणमा आजैदेखि लाग्नु सबै जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य हो । केही नकारात्मक कुराहरूमध्ये यहाँ नारी स्वतन्त्रताको अभियानमा देखापरेका विकृतिहरूमाथि टिप्पणी गरिनेछ ।
नारी स्वतन्त्रताविना किमार्थ, घर-परिवार, समाज र देशमा सुख, शान्ति, खुसी र समृद्धि संभव छैन । तर,स्वतन्त्रता भनेको के हो ? सबभन्दा पहिला यो बुझ्न जरूरी छ । मेरो बिचारमा स्वतन्त्रता भनेको अधिकार र कर्तब्यको सुन्दर संयोजन हो । अधिकारबिनाको कर्तब्य निरंकुश र कर्तब्यबिनाको अधिकार अराजक हुन्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा अराजकता बढ्दो छ ।
पक्कै पनि ब्यक्ति बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन । ब्यक्तिको सर्बोच्चतालाई सबैले सम्मान गर्नु पर्छ । तर ब्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहँदा समाजको मर्यादा र सीमालाई बिर्सनु हुँदैन । ब्यक्तिसँग घर-परिवार,समाज, देश, संस्कृति, इज्जत र सम्मान सबै कुरा जोडिएको हुन्छ । सायद त्यसैले दार्शनिक रूसोले भनेका होलान्- ‘मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर ऊ सर्वत्र सिक्रीले बाँधिएको हुन्छ ।’
शील र अश्लीलको परिभाषा आ-आफ्नो समाज र संस्कृति अनुसार फरक-फरक देखिन्छ । पश्चिमा समाजमा सामान्यत: नारी-पुरूष ‘हग’ गर्नु र ‘किस’ गर्नुलाई संस्कृति कै रूपमा लिइन्छ । तर हाम्रो समाजमा यसलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । तर, नांगिनुलाई पश्चिमेली र पूर्बेली दुबै समाजले पचाउन सक्दैन । अझ हाम्रो समाजले अंग प्रदर्शनलाई बर्जित नै गरेको छ ।
अंग प्रदर्शनको कारण ज्योती मगर र रिया श्रेष्ठ अहिले चर्चाको चुलीमा हुनुहुन्छ । ब्यक्तिगत रूपमा म उहाँहरूलाई इज्जत गर्छु । उहाँहरूको कलाको सम्मान गर्छु । तर, ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा देशका विभिन्न भागहरूमा ज्योतीजी र बिदेशमा रीयाजीले नेपाली संस्कृति र कला प्रदर्शन गर्ने बाहानामा जसरी आफूलाई नंग्याइरहनु भएको छ, त्यसले मजस्ता नेपाली नारीहरूको लज्जाले शीर नुहेको छ ।
यस पुरूष प्रधान समाजमा स्टेजमा तपाईंहरूको नग्न शरीर र कामुक हाउभाउ देख्दा जुन ताली र प्रसंशाको बर्षा हुन्छ, स्टेजबाट झरेपछि त्यसको सयगुणा बढी निन्दा र भत्सर्ना हुन्छ । बाहिर छोटो कपडामा नारी सुन्दरता देख्ने पुरूषहरू घरमा सकेसम्म बुर्काभित्र देख्न चाहन्छन् नारीलाई । पुरूषको यस्ता संकीर्ण सत्ता बिरूद्ध संघर्ष गर्नैपर्छ । तर, सीमा नाघेर होइन ।
तपाईंहरूले आफूलाई बोल्ड र आधुनिक नारी पनि भन्न सक्नुहोला । तर, अन्ततः तपाईंहरूको क्रियाकलापले नारीलाई केवल भोग्या र पुरूषको मनोरन्जनको साधन नै बनाउने छ । के यो हामी नेपाली नारीहरूका लागि सुखद कुरा हो ? कृपया एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोंच्ने कि ?
अन्तमा, मेरो विनम्र अनुरोध छ- सर्बांग नांगिन पाउनु नारी स्वतन्त्रता होइन । नांगो शरीरमा कुनै सौन्दर्य रहँदैन । तसर्थ, सामाजिक मर्यादा र सीमाभित्र रही ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने कि ?